Ukuthumela Nenqubomgomo Yokubuyisa
Abahlinzeki banga (ikakhulukazi ama-oda wangokwezifiso) badinga isikhathi esengeziwe sokucubungula ngaphambi kokuthunyelwa kwento. Amakhasimende azokwaziswa kulezi zimo. Izikhathi zokucubungula ezimaphakathi ezivela kubaphakeli ziba phakathi kwezinsuku ezi-1 kuye kwezingu-5. Ngokuya ngendawo ongaya kuyo e-US noma emazweni omhlaba, sicela uvumele phakathi kwezinsuku eziyi-1 kuye kwezingu-14 ukuthi i-oda lakho lifike (kuya ngendlela yokuhambisa esetshenzisiwe) Ama-oda womkhiqizo ngaphakathi kwe-US anamafreyimu wesikhathi esheshayo. Uma kudlule izinsuku ezingaphezu kwezingu-20 sicela usithumele i-imeyili ku: [i-imeyili ivikelwe] ukubuyekeza isimo se-oda lakho.
Izinhlobo eziningana zezimpahla zikhululekile ekubuyiselweni. Izimpahla ezilahlekayo ezifana nokudla, izimbali, amaphephandaba noma omagazini abakwazi ukubuyiselwa. Asawamukeli nemikhiqizo esondelene nayo noma impahla engcolile, izinto eziyingozi, noma iziphuzo ezinokutsha noma amagesi.
Izinto ezingeziwe ezingenakubuyiswa:
Imikhiqizo ye-software ehamba phambili
Ezinye izinto zokunakekelwa kwezempilo nezomuntu siqu
Ukuqedela ukubuyela kwakho, sidinga irisidi noma ubufakazi bokuthenga.
Sicela ungathumele ukuthenga kwakho kumkhiqizi.
Kunezimo ezithile lapho ukubuyiselwa okuyingxenye kuphela okunikezwa khona (uma kusebenza)
Ibhuku elinemibala ecacile yokusetshenziswa
I-CD, i-DVD, i-VHS tape, isofthiwe, umdlalo wevidiyo, i-cassette tape, noma irekhodi le-vinyl evuliwe
Noma iyiphi into engekho esimweni sayo sasekuqaleni, yonakaliswe noma ayikho izingxenye ngenxa yezizathu ezingekho ngenxa yesiphambeko sethu
Noma iyiphi into ebuyiselwe ngaphezu kwezinsuku ezingu-30 ngemuva kokulethwa
Imbuyiselo (uma ikhona)
Uma ukubuya kwakho kutholiwe futhi kuhlolwe, sizokuthumela i-imeyili ukukwazisa ukuthi sithole into yakho ebuyisiwe. Sizokukwazisa futhi ngokuvuma noma ukulahlwa kwembuyiselo yakho.
Uma uvunyiwe, imali yakho iyobuyiselwa, futhi isikweletu sizobe sisetshenziswe ngokuzenzakalelayo ekhadini lakho lesikweletu noma indlela yokukhokha yasekuqaleni, kungakapheli izinsuku ezithile.
Ukubuyiselwa kwemali ezayo noma engekho (uma kusebenza)
Uma ungakatholi ukubuyiselwa kwemali okwamanje, qala hlola i-akhawunti yakho yasebhange futhi.
Bese uxhumana nenkampani yakho yekhadi lesikweletu, kungathatha isikhathi ngaphambi kokuba imali yakho yokubuyiselwa imali ishicilelwe ngokomthetho.
Xhumana no-ebhange lakho ngokulandelayo. Kukhona isikhathi esithile sokucubungula ngaphambi kokubuyiswa kwemali.
Uma usuwenzile konke lokhu futhi ungakatholi ukubuyiselwa imali yakho, sicela uxhumane nathi [i-imeyili ivikelwe]
Thengisa izinto (uma kusebenza)
Izinto ezijwayelekile kuphela ezikhokhelwayo zingabuyiselwa, ngeshwa ukudayiswa izinto akunakubuyiselwa imali.
Ukuhwebelana (uma kusebenza)
Sifaka kuphela izinto uma zinephutha noma zilimele. Uma udinga ukuyishintshanisa ngento efanayo, sithumele i-imeyili ku [i-imeyili ivikelwe] bese uthumela into yakho ku:
I-Trivoshop Inc- Iyabuya
Sayre, kulungile 73662-6022
Uma le nto ibhalwe njengesipho lapho ithengwa futhi ithunyelwa ngqo kuwe, uzothola isikweletu sesipho ngenani lokubuyela kwakho. Uma ngabe into ebuyisiwe isitholiwe, isitifikedi sesipho sizothunyelwa kuwe.
Uma ngabe le nto ayingakaziwe njengesipho lapho ithengwa, noma umnikezi wesipho wayithumele umyalelo kubo ukuze akunike kamuva, sizothumela ukubuyiselwa kumnikezi wesipho futhi uzothola mayelana nokubuya kwakho.
Ukubuyisa umkhiqizo wakho, kufanele uthumele umkhiqizo wakho nge-imeyili ku:
Uzoba nesibopho sokukhokha izindleko zakho zokuthumela ngokubuyisela into yakho. Izindleko zokuthumela azikhokhelwa. Uma uthola ukubuyiselwa kwemali, izindleko zokuthumela imbuyiselo zizoncishiswa ekubuyiselweni kwemali yakho.
Kuye lapho uhlala khona, isikhathi esingathatha ukuze umkhiqizo wakho oshintshisiwe ufike kuwe, ungahluka.
Izimali ezikhokhwa kabusha kungenzeka zisebenze ngokuya ngesimo se-oda ukuthi intwana iyakhanselwa noma ibuyiselwe imali.
Uma uthumela into engaphezu kwe-$ 75, kufanele ucabange ukusebenzisa isevisi yokuthumela imoto noma ukuthenga umshuwalense wokuthutha. Asiqinisekisi ukuthi sizokwamukela into yakho ebuyisiwe.